အသက်က ၃၂ နှစ် အရွယ် အပျိုစစ်စစ် အပျိုကြီးတစ်ယောက် ဟိုစိတ်တွေ ထိန်းလို့မရအောင် ဖြစ်နေချိန် - Apannpyay
Home > Uncategorized > ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ > အသက်က ၃၂ နှစ် အရွယ် အပျိုစစ်စစ် အပျိုကြီးတစ်ယောက် ဟိုစိတ်တွေ ထိန်းလို့မရအောင် ဖြစ်နေချိန်
ဆရာရှင့် ကျမ အခု ရောဂါတခု ခံစားနေရလို့ စိတ်ပူလို့ ဆရာ့ကို မေးတာပါ။ ရင်ဖွင့်တာပါရှင့် . . . . . ကျမ အသက်က ၃၂ နှစ် ရှိပါပြီ။ အပျိုပါရှင့်။ ကျမအရမ်းချစ်တဲ့ ချစ်သူတယောက် ရှိပါတယ်။
ပြောချင်တာက ကျမ တခါမှ ယောက်ျားနဲ့ တူတူမနေဘူးပါဘူး။ ချစ်သူရှိတယ် ဆိုတာကလည်း သူက အဝေး မှာပါရှင့်။ ကျမမှာမကောင်းတဲ့အချက်တခုရှိပါတယ်။ ကျမ လိင်ဆက် ဆံချင်တဲ့စိတ် ခဏခဏဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်တည်းက ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဆန္ဒဖြေဖျောက်တဲ့အကျင့် ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျမ သွားတိုက်တံ လက်ကိုင်ထူထူနဲ့ဟာမျိုးနဲ့ ၁နှစ်လောက်ထိ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ်ပဲလုပ်ပါတယ်။
မလုပ်ရင်လည်း ကျမ တကယ် မနေနိုင်တော့လို့ပါရှင့်။ အမှန်ဆိုရင်တော့အဲလိုမျိုးကို မလုပ်ချင်ပါဘူး။ အဲလိုလုပ်တာ အပြစ်ရှိလားရှင့်။ အခုကျမပြောချင်တာက ကျမရဲ့ သားအိမ်လို့ထင်ရတဲ့ ဘယ်ဘက်ဆီး ခုံ အထက်နားက တခါတခါဆိုရင်အရမ်းနာပါတယ်။
ဆိုင်ကယ် စီးတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း နာပါတယ်။ နောက်ပြီးလိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့စိတ် ဖြစ်ရင် အခုနောက်ပိုင်း ကြောက်လို့ ဘာနဲ့မှမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးရှင့်။ အဲဒါဆိုလည်း အဲလိုစိတ် ဖြစ်လာတော့လည်း နာပါတယ်ရှင့်။ အဲဒါ ကျမ သားအိမ်မှာ ရောဂါများ ရနေတာလား၊ ကျမ လိင်ဆက် ဆံချင်တဲ့စိတ်က ခဏခဏဖြစ်တာလည်း ရောဂါလားရှင့်။
နောက်ပြီး ကျမ ရည်းစားနဲ့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ရင်ကော ကျမအဲလိုမျိုးတွေ လုပ်ခဲ့ဖူး တာ ပြောပြရမှာလားရှင့်။ ကျမကို ဖြေကြားပေးပါရှင့်။ မိန်းမဖြစ်ဖြစ် ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ် လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့စိတ် ခဏ ခဏဖြစ်တာနဲ့ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဆန္ဒဖြေဖျောက်တဲ့အကျင့် ရှိတယ်ဆိုတာ ပုံမှန်စိတ်ဖြစ်တယ်။
အဲလိုမဖြစ်ရင်သာ ဆေးကုဘို့လိုပါတယ်။ ၁၉၅ဝ တုံးက Alfred Kinsey(အဲလ်ဖရက်-ကင်ဆေး) လုပ်တဲ့ သုတေသန အရ ယောက်ျား ၉၂% နဲ့ မိန်းမ ၆၂% ဟာဘဝတသက်တာမှာ ဖါသာ-အာသာဖြေတာ လုပ်ကြတာကို သိရတယ်။ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ဗိတိန်မှာလေ့လာမှုလုပ်တော့လဲ အသက် ၁၆ နှစ်ကနေ ၄၄ နှစ်ကြား ယောက်ျား ၉၅% နဲ့ မိန်းမ ၉၁%လုပ်ဖူးကြတာသိရတယ်။
၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှာ ဗြိတိန်၊ နယ်သာလင် နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေက ဆယ် ကျော်သက်တွေကိုနေ့တိုင်း Masturbation (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်စေဘို့ အားပေးခဲ့တယ်။ Orgasm(အော်ဂဇင်မ်) လိင်ဆန္ဒပြည့် ဝမှု ဆိုတာ အခွင့်အရေးတရပ် ဖြစ်တယ်လို့တောင် လက်ကမ်း ကြော်ညာမှာ ပါသေးတယ်။
ဒီလိုလုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တခုက Teen pregnancyဆယ်ကျော်သက်-ကိုယ်ဝန်ရမှာနဲ့ STDs လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေကို ကာကွယ်စေဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခေတ်မှာ Safe sex လို့ လူသုံးများလာပြီ။ စိတ်ချရတဲ့လိင်မှုရေး ရာလို့ ပြောချင်တာပါ။
HIV-AIDS ရောဂါ၊ အသဲရောင် ဘီ-စီ တွေပါ မကူးစက်နိုင်ပါ။ Benefits ကောင်းကျိုးတွေ . . . • Intercourse တကယ်တန်း လိင်ဆက်ဆံဘို့ အဆင်မပြေချိန်မျိုးမှာ လုပ်နိုင်လို့တခြားမသင့်တာမျိုး အားကိုးစရာမလိုတဲ့ အစားထိုးနည်း ကောင်း ဖြစ်တယ်။
• Masturbation လုပ်တာကြောင့် လိင်ဆက်ဆံရာမှာ Fertility မျိုးပွါးစေရေးအားပေးတယ်။ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် သြစတြေးလျ လေ့လာမှု တခုအရ နေ့တိုင်း သုက်လွှတ်ခြင်းဟာသုက်ပိုး-ကျန်းမာရေးကို အားပေးတယ်။ • Female masturbation အမျိုးသမီးတွေ ဖါသာ-အာသာဖြေ တာကြောင့် ဗဂျိုင်းနာ သားအိမ်ဝ နဲ့ သားအိမ်တွေမှာ အပြောင်းအ လဲတွေ ဖြစ်စေတယ်။
ဒါတွေကနေ သန္ဓေရစေဘို့ပိုပြီးအဆင်ပြေစေ မယ်။ ကလေးမရလို့ သုက်ပိုးကို အပြင်ကနေ ထည့်ပေးနည်း လုပ်အပြီး၁-၄၅ မိနစ်အတွင်းမှာ Orgasm ရစေအောင်လုပ်နိုင်ရင် သုက်ပိုးက လိုရာခရီးကိုကောင်းကောင်းရောက်စေတယ်လို့ သိရတယ်။ မ-မျိုးဥနဲ့တွေ့စေဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။
• Female masturbation ကြောင့် သားအိမ်ဝက အချွဲကို အက်စစ်ဓါတ်ပိုစေတာမို့ရောဂါပိုးဝင်မှာကို အဟန့်အတားပြုရာ ကျတယ်။ • Relieve depression စိတ်ကျတာကို သက်သာစေပြီး၊ Higher sense of self-esteemကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်မှု ပိုေ စတယ်လို့ စိတ်ကျန်းမာရေး အရေးအသားတွေမှာ ဖတ်ရမယ်။
• Mutual masturbation ဆိုတာ နှစ်ဦးသား အပြန်အလှန် လိင်စိ တ်ဖြေပေးကြတာဖြစ်တယ်။ ဘယ်လိုနေရာကို ဘယ်လို လုပ်တာ ကို တဖက်သား သဘောကျတယ် ဆိုတာကိုဖေါ်ထုတ်ပေးမယ်။ • (STDs) လိင်ကတဆင့်-ကူးစက်ရောဂါတွေ ဖြစ်မှာကိုပါ နည်းစေတယ်။ • Masturbation လုပ်ပြီး Sexual climax ရစေတယ်ဆိုရင် Relaxed ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ပြောလျှော့သွားပြီး Contented state ကျေနပ်မှုရစေမယ်။
Drowsiness and sleepအိပ်ပျော်စေမယ်။ • တချို့ဆရာဝန်တွေက (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်တာဟာ Cardiovascular workout နှလုံး-သွေးကြောဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်းလို့ ယူဆကြတယ်။သွေးတိုးကို ကျစေတယ်။ • ကိုယ်ဝန်မရစေဘူး။ Risks ဘာတွေကို ဂရုစိုက်ရမလဲ • လက်ကို မတိုင်ခင် အသေအခြာ ရေဆေးပါ။ လက်သည်းဖြတ် ထားရမယ်။ လက်မှာ အနာအဆာမရှိရဘူး။
• အသုံးပြုတဲ့ ကိရိယာပစ္စည်းကြောင့် ဘေးဖြစ်မှာသတိထားပါ။ ဂျာမနီမှာ တခါကအမျိုးသမီးတယောက် ခဲတန်က ဆီးအိမ်ထဲ ရောက်နေတာ ဖြစ်ဘူးတယ်။ ဗဂျိုင်းနား နဲ့ဆီးသွားပေါက် မှားသွားလို့ဖြစ်တယ်။ • စအိုကို ထိကိုင်ရင် ပိုသတိကြီးရမယ်။ စအိုသုံးသူတွေဆိုရင် Latex gloves(လေးတက်စ်) လက်အိပ်သုံးရမယ်။ ရေကို အခြေခံလုပ်တဲ့ Lubricant ချောဆီသုံးရမယ်။ စအိုနဲ့ ဗဂျိုင်းနား အပြန်အလှန်လက်သွားတာ မကောင်းဘူး။
• Finger cot (Finger condom) လက်ဖျားထိပ် (ကွန်ဒွမ်) ဆိုတာလဲရှိတယ်။ အထဲမှာကျွတ်ကျန်နေမှာကို သတိထားရတယ်။ Methods နည်းလမ်းတွေ“ဘယ်နည်းက အကောင်းဆုံးသလဲ မပြောနိုင်ပါ” လို့ Paul Joannidesစိတ်အထူးကုဆရာဝန်က ဆိုပါတယ်။ အများဆုံး သုံးကြတာက (၁) Fingers နဲ့ (၂) Vibrators ကရိယာဖြစ်တယ်။ အမေရိကားမှာတော့ လေ့ လာမှုတခုထဲက “အသက် ၁၈ ကနေ ၆ဝနှစ်ကြားရှိ အမျိုးသ မီးပေါင်း ၂ဝ၅၆ ယောက်ထဲမှာ တဝက်ကျော်က Vibrator သုံးတယ်” လို့ Indiana University အင်ဒီယာနာ-တက္ကသိုလ် Center for Sexual HealthPromotion က တွဲဖက်-ဒါရိုက်တာ Debby Herbenick ကဆိုပါတယ်။
သူတို့ဟာMasturbation ဖါသာ- အာသာဖြေတာမှာရော Intercourse လိင်ဆက်ဆံရာမှာပါ သုံးကြတယ်။ Fingering လက်ကိုသုံးတဲ့နည်း • Vaginal fingering ဗဂျိုင်းနာထဲ လက်ချောင်းထည့်ခြင်းဆေးစကားလဲဖြစ်၊ဥပဒေသုံးလဲဖြစ်တယ်။ လက်ချောင်း တချောင်း၊ တချောင်းမက ဖြစ်နိုင်တယ်။
လက်တခုလုံးဆိုတာလဲ ရှိသေးတယ်။ • Clitoris မ-အစိ၊ Vulva မိန်းမကိုယ်၊ Vagina (ဗဂျိုင်းနား) တွေကို လက်နဲ့ပွတ်သပ်တာ၊ ကလိတာ၊ ထိုးသွင်းတာတွေ ပါမယ်။ • ရည်ရွယ်ချက် ၂ ခုရှိတယ်။ Sexual arousal and stimulation လိင်စိတ်ဖြစ်စေ၊ကဲစေဘို့နဲ့ Orgasm လိင်ဆန္ဒ ပြည့်ဝစေဘို့ ဖြစ်တယ်။
• ဒီလိုလုပ်တာချည်းနဲ့ အဆုံးသပ်တာရှိသလို တကယ့်လိင်ဆက်ဆံမှုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်လဲ Foreplay အစပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ် Sexual activities ကြားကာလမှာဖြစ်ဖြစ် လုပ်နိုင်တယ်။ • Mutual masturbation နှစ်ယောက်သား အပြန်အလှန် အာသာဖြေပေးတာမှာလဲသုံးနိုင်သလို Finger oneself တယောက် ထဲလဲ လုပ်နိုင်တယ်။
• မိန်းမတယောက် Orgasm (အော်ဂဇင်မ်) ရစေဘို့ရာ Massage of the vulvaမိန်းမကိုယ်နေရာကို ပွတ်သပ်ခြင်းနဲ့ အထူးသဖြင့် Clitorisမ အစိကိုပွတ်သပ်ခြင်းဟာ အဓိကအရေးပါတယ်။ • Clitoral body မ-အစိကိုယ်ရော Shaft အရင်နေရာပါ သုံးနိုင် တယ်။
အများအားဖြင့်Skin of the clitoral hood မ-အစိအထ က်နေရာ အရေပြားကို ထက်-အောက်၊ ဘယ်-ညာ၊စက်ဝိုင်းလို ကြိုက်သလို လုပ်နိုင်တယ်။ • Labia မိန်းမကိုယ် နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ ကျန်နေရာမှန်သမျှကိုလဲ အသုံးပြုနိုင်တယ်။ Fingering the vagina (ဗဂျိုင်းနား) ထဲကို လက်ထည့်တာလဲ လုပ်ပါတယ်။ • G-Spot ဆိုတာကို ထိမိစေရတယ်လို့လဲ ပြောကြတယ်။
(ဗဂျိုင်းနား) ရဲ့ရှေ့(ရှေ့ဆိုတာ ပက်လက်အိပ်နေရင် အပေါ် ကိုပြောတာပါ) ၅ စင်တီမီတာနေရာမှာလို့ ဆိုတယ်။ • A-spot က သူ့ထက် ပိုနက်တဲ့နေရာမှာ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီနေရာတွေ တကယ်ရှိ-မရှိ ငြင်းနေကြဆဲဖြစ်တယ်။ • ကိုယ့်ဖါသာကိုယ်လုပ်သူတွေက ဘယ်နေရာကို ဘယ်လို လုပ်ရင် ကျေနပ်မှုပိုစေမယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိပါတယ်။ ဆရာ ဝန်မလိုပါ။
သာယာမှုရရင် အရည်ပိုစိုစွပ်လာမှာ အမှန်ပါ။ • G-Spot ejaculation ဆိုတာ ကျေနပ်မှု ကောင်းလွန်းပြီး အရည်ဟာ Urethra ဆီးထွက်လမ်းကနေ ထွက်တယ်။ Urine ဆီးတော့ မဟုတ်ဘူး။ • အမျိုးသမီးတွေ Orgasm ပြီးတဲ့အခါ ထွက်တဲ့အရည် Female ejaculate ထဲမှာAntibodies (အင်တီဘော်ဒီ) တမျိုးပါတယ်။
အဲဒါဟာ ယောက်ျားတွေ Prostateဆီးကျိတ်ကထွက်တာနဲ့ အလားတူတယ်။ အတွင်းကျကျအထိ လက်ထည့်ရမှာမို့ လက်ချောင်းသုံးတာကြောင့် A-spot ကိုထိစေဘို့ နည်းတယ်။ Vibrator တုန်ခါမှုရှိတဲ့ ကရိယာနည်း • (ဗစ်တိုးရီးယား) ခေတ်က Female hysteria အမျိုးသမီး (ဟစ်တီးရီးယား)ရောဂါကုသနည်း တခုထဲမှာ Masturbation နည်းပါတယ်။ Pelvic massage လို့သာခေါ်သေးတယ်။ခေတ်ပေါ် Vibrators နဲ့ Sex toys တွေဟာ ၁၉၈ဝ နောက် ကစပြီး ပေါ်ပြူလာဖြစ်လာတယ်။
• ၂ဝဝ၉ လေ့လာမှုတခုအရ အမေရိကားမှာ ၁၈-၆ဝ နှစ်အရွယ်ရှိယောက်ျား ၄၆% နဲ့ မိန်းမ၅၃% ဟာ Vibrator သုံးသတဲ့။ • မိန်းမ ၃ဝ% ကသာ ပုံမှန် ဖိုမ ဆက်ဆံရာကနေ (အော်ဂဇင်မ်) ရတယ်။ အဲဒါအတွက်Vibrators ကို သုံးဘို့ ဆရာဝန်တွေက ညွှန်တယ်။ Masturbation အတွက်ရောIntercourse အတွက်ပါ အသုံးခိုင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ • Clitoral vibrator ဆိုတာ သပ်သပ်လာသေးပေမဲ့ အားလုံးဟာ ဒီနေရာကိုထိမိစေရတာဖြစ်တယ်။
ဒီဇိုင်းကတော့ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ o G-Spot Vibrator ဆိုတာလဲလာသေးတယ်။ ခပ်ကောက်ေ ကာက်ပုံရှိတယ်။o Dildo-shaped ဆိုတာ ယောက်ျား-အင်္ဂါပုံအ တိုင်း အရွယ်တူ လုပ်ထားတဲ့ကစားစရာမျိုးဖြစ်တယ်။ Plastic ( ပလပ်စတစ်)၊ Silicone (စီဘီကွန်)၊ Rubber(ရာဘာ)၊ Vinyl (ဗီနိုင်းလ်) နဲ့ Latex (လေးတက်စ်) ပစ္စည်းတွေနဲ့ လုပ်ထားတယ်။ o Waterproof လဲရှိတယ်။ ရေချိုးခန်းမှာ သုံးနိုင်ဘို့ ဖြစ်တယ်။
o Egg-shaped vibrator နဲ့ Rabbit ဆိုတာတွေက ဗဂျိုင်းနာရော (ကလိုက်တောရစ်)ကိုပါ ထိမိစေဘို့ လုပ်တားတယ်။ • ကနေဒါနိုင်ငံက (တိုရွန်တို) လေ့လာမှုအရ ဖါသာ-အာသောြေ ဖရာမှာ (ဘိုင်ဗရေတာ) ကိုအသုံးများရင် တကယ်တန်း ခင်ပွန်း- အဖေါ်နဲ့ဆက်ဆံချိန်မှာ (အော်ဂဇင်မ်) ရတာကိုDesensitize ပြောင်ပြန်အကျိုး သက်ရောက်စေနိုင်တယ်လို့ သတိပေးတယ်။
အဲဒီ ဆရာဝန်ကသူ့လူနာတွေကို (အိုက်စ်ခရင်မ်) ကို နေ့တိုင်း မစားချင်ကြသလို နေသင့်တယ်လို့အကြံပေးတယ်။ Autonomic nervous system အလိုအလျှောက် သက်ရောက်တဲ့အာရုံကြော စနစ်က အကျင့်ရသွားစေမယ်လို့ ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ • Vibrator သုံးရင် လိင်အင်္ဂါနေရာမှာ နာတာ-ထုံတာ ဖြစ်မလား သတိထားသင့်တယ်။Herbenick’s vibrator survey သုတေသ နအရ ၃ဝ% မှာ အဲလိုဖြစ်တယ်။
တခြားနည်းတွေ • တချို့က Back ofavibrating toothbrush head တုံခါမှု လုပ်ေ ပးနိုင်တဲ့သွားတိုက်တံခေါင်းရဲ့ နောက်ဖက်၊ • တချို့က Handle ofahairbrush ခေါင်းဘီး လက်ကိုင်ရိုး၊ • တချို့က Water jets in the bathtub ရေချိုးခန်းက ရေပန်း ထိပ်ဖျား သုံးကြတယ်။ • တခြားနည်းနာတွေလဲ ရှိမှာပါ။ ရောဂါမဟုတ်ပါ
• မိန်းကလေးတွေလဲ ယောက်ျားလေးတွေလိုဘဲ ဖါသာအာသြာေ ဖဖျောက်တာလုပ်မိတာကို Feelguilty အပြစ်လုပ်သလို ခံစား တတ်ကြတယ်။ Sex therapists လိင်အထူးကုဆရာဝန်တွေကေ တာ့ အဲလို မထင်မြင်သင့်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ • Mood စိတ်မူ၊ Spirits စိတ်ဓါတ် တက်စေမယ်။ စိတ်ကျနေသူေ တွကို သက်သာရာ ရစေမယ်။Solo sex တယောက်ထဲစခန်း သွားတာမို့ ကိုယ့်အဖေါ် ဘယ်လိုနေမလဲ ဆိုတာစိတ်ကူးထည့်စရာလဲ မလိုဘူး။
• အဲလိုလုပ်တာဟာ ကိုယ့် ခင်ပွန်း-အဖေါ်ကို မချစ်လို့လဲ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်လုပ်တာသာဖြစ်တယ်။ သူနဲ့နေတဲ့အခါမှာလဲ ပိုပြီးသာလွန်ကောင်းမွန်စေနိုင်သေးတယ်။ သူ့ကိုကိုယ်ကနေ ဘယ်လိုကဘယ်လိုဆိုတာ ဆရာလုပ်နိုင်တယ်။ • ယောက်ျားနဲ့နေလို့ (အော်ဂဇင်မ်) မရတတ်သူတွေ ဒီနည်းနဲ့ကူနိုင် တယ်။
Lubrication စိုစွပ်မှု၊ Desire ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်မှု၊ Arousal စိတ်နိုး ထမှု နဲ့ Orgasm(အော်ဂဇင်မ်) တွေမျာ ပိုကောင်းစေတယ်။ • Pain နာတတ်တာလဲ သက်သာစေမယ်။ မနာတတ်သူတွေလဲ သုံးကြတာပါဘဲ။ • သိတဲ့အတိုင်း အမျိုးသမီးများဟာ စိုးရိမ်မှုများတတ်တယ်၊ ဖိစီးမှုများတတ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ဖြေလျှော့ပေးဘို ပိုလိုမယ်။
(မာစတာဘေးရှင်း) ကနေ ကူညီနိုင်တယ်။ • Migraine (မိုင်ဂရင်း) ခေါင်းမူး-ခေါင်းကိုက်ရောဂါ ရှိသူတွေကိုလဲ သက်သာရာ ရစေနိုင်တယ်။ ခပ်ရှားရှား တချို့လူနာတွေမှာ (အော်ဂဇင်မ်) ကနေ (မိုင်ဂရင်း)ထတတ်တယ်။ • Menstrual cramps ရာသီလာရင်နာတာ နဲ့ Premenstrual syndrome (PMS) ရာသီအလာခင်ဖြစ်ချင်တာတွေ ကိုပါ သက် သာစေမယ်။ Masturbation (မာစတာဘေးရှင်း) အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၂၅) ကိုလဲဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာရှငျ့ ကမြ အခု ရောဂါတခု ခံစားနရေလို့ စိတျပူလို့ ဆရာ့ကို မေးတာပါ။ ရငျဖှငျ့တာပါရှငျ့ . . . . . ကမြ အသကျက ၃၂ နှဈ ရှိပါပွီ။ အပြိုပါရှငျ့။ ကမြအရမျးခဈြတဲ့ ခဈြသူတယောကျ ရှိပါတယျ။
ပွောခငျြတာက ကမြ တခါမှ ယောကျြားနဲ့ တူတူမနဘေူးပါဘူး။ ခဈြသူရှိတယျ ဆိုတာကလညျး သူက အဝေး မှာပါရှငျ့။ ကမြမှာမကောငျးတဲ့အခကျြတခုရှိပါတယျ။ ကမြ လိငျဆကျ ဆံခငျြတဲ့စိတျ ခဏခဏဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ လှနျခဲ့တဲ့ ၅ နှဈလောကျတညျးက ကိုယျ့ဖာသာကိုယျ ဆန်ဒဖွဖြေောကျတဲ့အကငျြ့ ဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။ ကမြ သှားတိုကျတံ လကျကိုငျထူထူနဲ့ဟာမြိုးနဲ့ ၁နှဈလောကျထိ လုပျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုနောကျပိုငျး ကိုယျ့လကျနဲ့ကိုယျပဲလုပျပါတယျ။
မလုပျရငျလညျး ကမြ တကယျ မနနေိုငျတော့လို့ပါရှငျ့။ အမှနျဆိုရငျတော့အဲလိုမြိုးကို မလုပျခငျြပါဘူး။ အဲလိုလုပျတာ အပွဈရှိလားရှငျ့။ အခုကမြပွောခငျြတာက ကမြရဲ့ သားအိမျလို့ထငျရတဲ့ ဘယျဘကျဆီး ခုံ အထကျနားက တခါတခါဆိုရငျအရမျးနာပါတယျ။
ဆိုငျကယျ စီးတဲ့အခါမြိုးမှာလညျး နာပါတယျ။ နောကျပွီးလိငျဆကျဆံခငျြတဲ့စိတျ ဖွဈရငျ အခုနောကျပိုငျး ကွောကျလို့ ဘာနဲ့မှမလုပျဖွဈပါဘူးရှငျ့။ အဲဒါဆိုလညျး အဲလိုစိတျ ဖွဈလာတော့လညျး နာပါတယျရှငျ့။ အဲဒါ ကမြ သားအိမျမှာ ရောဂါမြား ရနတောလား၊ ကမြ လိငျဆကျ ဆံခငျြတဲ့စိတျက ခဏခဏဖွဈတာလညျး ရောဂါလားရှငျ့။
နောကျပွီး ကမြ ရညျးစားနဲ့ အိမျထောငျကခြဲ့ရငျကော ကမြအဲလိုမြိုးတှေ လုပျခဲ့ဖူး တာ ပွောပွရမှာလားရှငျ့။ ကမြကို ဖွကွေားပေးပါရှငျ့။ မိနျးမဖွဈဖွဈ ယောကျြားဖွဈဖွဈ လိငျဆကျဆံခငျြတဲ့စိတျ ခဏ ခဏဖွဈတာနဲ့ကိုယျ့ဖာသာကိုယျ ဆန်ဒဖွဖြေောကျတဲ့အကငျြ့ ရှိတယျဆိုတာ ပုံမှနျစိတျဖွဈတယျ။
အဲလိုမဖွဈရငျသာ ဆေးကုဘို့လိုပါတယျ။ ၁၉၅ဝ တုံးက Alfred Kinsey(အဲလျဖရကျ-ကငျဆေး) လုပျတဲ့ သုတသေန အရ ယောကျြား ၉၂% နဲ့ မိနျးမ ၆၂% ဟာဘဝတသကျတာမှာ ဖါသာ-အာသာဖွတော လုပျကွတာကို သိရတယျ။ ၂ဝဝ၇ ခုနှဈ ဗိတိနျမှာလလေ့ာမှုလုပျတော့လဲ အသကျ ၁၆ နှဈကနေ ၄၄ နှဈကွား ယောကျြား ၉၅% နဲ့ မိနျးမ ၉၁%လုပျဖူးကွတာသိရတယျ။
၂ဝဝ၉ ခုနှဈမှာ ဗွိတိနျ၊ နယျသာလငျ နဲ့ ဥရောပနိုငျငံတှကေ ဆယျ ကြျောသကျတှကေိုနတေို့ငျး Masturbation (မာစတာဘေးရှငျး) လုပျစဘေို့ အားပေးခဲ့တယျ။ Orgasm(အျောဂဇငျမျ) လိငျဆန်ဒပွညျ့ ဝမှု ဆိုတာ အခှငျ့အရေးတရပျ ဖွဈတယျလို့တောငျ လကျကမျး ကွျောညာမှာ ပါသေးတယျ။
ဒီလိုလုပျရတဲ့ ရညျရှယျခကျြတခုက Teen pregnancyဆယျကြျောသကျ-ကိုယျဝနျရမှာနဲ့ STDs လိငျကတဆငျ့ ကူးစကျရောဂါတှကေို ကာကှယျစဘေို့ဖွဈပါတယျ။ ဒီခတျေမှာ Safe sex လို့ လူသုံးမြားလာပွီ။ စိတျခရြတဲ့လိငျမှုရေး ရာလို့ ပွောခငျြတာပါ။
HIV-AIDS ရောဂါ၊ အသဲရောငျ ဘီ-စီ တှပေါ မကူးစကျနိုငျပါ။ Benefits ကောငျးကြိုးတှေ . . . • Intercourse တကယျတနျး လိငျဆကျဆံဘို့ အဆငျမပွခြေိနျမြိုးမှာ လုပျနိုငျလို့တခွားမသငျ့တာမြိုး အားကိုးစရာမလိုတဲ့ အစားထိုးနညျး ကောငျး ဖွဈတယျ။
• Masturbation လုပျတာကွောငျ့ လိငျဆကျဆံရာမှာ Fertility မြိုးပှါးစရေေးအားပေးတယျ။ ၂ဝဝ၉ ခုနှဈ သွစတွေးလြ လလေ့ာမှု တခုအရ နတေို့ငျး သုကျလှတျခွငျးဟာသုကျပိုး-ကနျြးမာရေးကို အားပေးတယျ။ • Female masturbation အမြိုးသမီးတှေ ဖါသာ-အာသာဖွေ တာကွောငျ့ ဗဂြိုငျးနာ သားအိမျဝ နဲ့ သားအိမျတှမှော အပွောငျးအ လဲတှေ ဖွဈစတေယျ။
ဒါတှကေနေ သန်ဓရေစဘေို့ပိုပွီးအဆငျပွစေေ မယျ။ ကလေးမရလို့ သုကျပိုးကို အပွငျကနေ ထညျ့ပေးနညျး လုပျအပွီး၁-၄၅ မိနဈအတှငျးမှာ Orgasm ရစအေောငျလုပျနိုငျရငျ သုကျပိုးက လိုရာခရီးကိုကောငျးကောငျးရောကျစတေယျလို့ သိရတယျ။ မ-မြိုးဥနဲ့တှစေ့ဘေို့ ဖွဈပါတယျ။
• Female masturbation ကွောငျ့ သားအိမျဝက အခြှဲကို အကျစဈဓါတျပိုစတောမို့ရောဂါပိုးဝငျမှာကို အဟနျ့အတားပွုရာ ကတြယျ။ • Relieve depression စိတျကတြာကို သကျသာစပွေီး၊ Higher sense of self-esteemကိုယျ့ကိုယျကို ကနြေပျမှု ပိုေ စတယျလို့ စိတျကနျြးမာရေး အရေးအသားတှမှော ဖတျရမယျ။
• Mutual masturbation ဆိုတာ နှဈဦးသား အပွနျအလှနျ လိငျစိ တျဖွပေေးကွတာဖွဈတယျ။ ဘယျလိုနရောကို ဘယျလို လုပျတာ ကို တဖကျသား သဘောကတြယျ ဆိုတာကိုဖျေါထုတျပေးမယျ။ • (STDs) လိငျကတဆငျ့-ကူးစကျရောဂါတှေ ဖွဈမှာကိုပါ နညျးစတေယျ။ • Masturbation လုပျပွီး Sexual climax ရစတေယျဆိုရငျ Relaxed ကိုယျရောစိတျပါ ပွောလြှော့သှားပွီး Contented state ကနြေပျမှုရစမေယျ။
Drowsiness and sleepအိပျပြျောစမေယျ။ • တခြို့ဆရာဝနျတှကေ (မာစတာဘေးရှငျး) လုပျတာဟာ Cardiovascular workout နှလုံး-သှေးကွောဆိုငျရာ လကေ့ငျြ့ခနျးလို့ ယူဆကွတယျ။သှေးတိုးကို ကစြတေယျ။ • ကိုယျဝနျမရစဘေူး။ Risks ဘာတှကေို ဂရုစိုကျရမလဲ • လကျကို မတိုငျခငျ အသအေခွာ ရဆေေးပါ။ လကျသညျးဖွတျ ထားရမယျ။ လကျမှာ အနာအဆာမရှိရဘူး။
• အသုံးပွုတဲ့ ကိရိယာပစ်စညျးကွောငျ့ ဘေးဖွဈမှာသတိထားပါ။ ဂြာမနီမှာ တခါကအမြိုးသမီးတယောကျ ခဲတနျက ဆီးအိမျထဲ ရောကျနတော ဖွဈဘူးတယျ။ ဗဂြိုငျးနား နဲ့ဆီးသှားပေါကျ မှားသှားလို့ဖွဈတယျ။ • စအိုကို ထိကိုငျရငျ ပိုသတိကွီးရမယျ။ စအိုသုံးသူတှဆေိုရငျ Latex gloves(လေးတကျဈ) လကျအိပျသုံးရမယျ။ ရကေို အခွခေံလုပျတဲ့ Lubricant ခြောဆီသုံးရမယျ။ စအိုနဲ့ ဗဂြိုငျးနား အပွနျအလှနျလကျသှားတာ မကောငျးဘူး။
• Finger cot (Finger condom) လကျဖြားထိပျ (ကှနျဒှမျ) ဆိုတာလဲရှိတယျ။ အထဲမှာကြှတျကနျြနမှောကို သတိထားရတယျ။ Methods နညျးလမျးတှေ“ဘယျနညျးက အကောငျးဆုံးသလဲ မပွောနိုငျပါ” လို့ Paul Joannidesစိတျအထူးကုဆရာဝနျက ဆိုပါတယျ။ အမြားဆုံး သုံးကွတာက (၁) Fingers နဲ့ (၂) Vibrators ကရိယာဖွဈတယျ။ အမရေိကားမှာတော့ လေ့ လာမှုတခုထဲက “အသကျ ၁၈ ကနေ ၆ဝနှဈကွားရှိ အမြိုးသ မီးပေါငျး ၂ဝ၅၆ ယောကျထဲမှာ တဝကျကြျောက Vibrator သုံးတယျ” လို့ Indiana University အငျဒီယာနာ-တက်ကသိုလျ Center for Sexual HealthPromotion က တှဲဖကျ-ဒါရိုကျတာ Debby Herbenick ကဆိုပါတယျ။
သူတို့ဟာMasturbation ဖါသာ- အာသာဖွတောမှာရော Intercourse လိငျဆကျဆံရာမှာပါ သုံးကွတယျ။ Fingering လကျကိုသုံးတဲ့နညျး • Vaginal fingering ဗဂြိုငျးနာထဲ လကျခြောငျးထညျ့ခွငျးဆေးစကားလဲဖွဈ၊ဥပဒသေုံးလဲဖွဈတယျ။ လကျခြောငျး တခြောငျး၊ တခြောငျးမက ဖွဈနိုငျတယျ။
လကျတခုလုံးဆိုတာလဲ ရှိသေးတယျ။ • Clitoris မ-အစိ၊ Vulva မိနျးမကိုယျ၊ Vagina (ဗဂြိုငျးနား) တှကေို လကျနဲ့ပှတျသပျတာ၊ ကလိတာ၊ ထိုးသှငျးတာတှေ ပါမယျ။ • ရညျရှယျခကျြ ၂ ခုရှိတယျ။ Sexual arousal and stimulation လိငျစိတျဖွဈစေ၊ကဲစဘေို့နဲ့ Orgasm လိငျဆန်ဒ ပွညျ့ဝစဘေို့ ဖွဈတယျ။
• ဒီလိုလုပျတာခညျြးနဲ့ အဆုံးသပျတာရှိသလို တကယျ့လိငျဆကျဆံမှုရဲ့ အစိတျအပိုငျးအဖွဈလဲ Foreplay အစပိုငျးမှာဖွဈဖွဈ Sexual activities ကွားကာလမှာဖွဈဖွဈ လုပျနိုငျတယျ။ • Mutual masturbation နှဈယောကျသား အပွနျအလှနျ အာသာဖွပေေးတာမှာလဲသုံးနိုငျသလို Finger oneself တယောကျ ထဲလဲ လုပျနိုငျတယျ။
• မိနျးမတယောကျ Orgasm (အျောဂဇငျမျ) ရစဘေို့ရာ Massage of the vulvaမိနျးမကိုယျနရောကို ပှတျသပျခွငျးနဲ့ အထူးသဖွငျ့ Clitorisမ အစိကိုပှတျသပျခွငျးဟာ အဓိကအရေးပါတယျ။ • Clitoral body မ-အစိကိုယျရော Shaft အရငျနရောပါ သုံးနိုငျ တယျ။
အမြားအားဖွငျ့Skin of the clitoral hood မ-အစိအထ ကျနရော အရပွေားကို ထကျ-အောကျ၊ ဘယျ-ညာ၊စကျဝိုငျးလို ကွိုကျသလို လုပျနိုငျတယျ။ • Labia မိနျးမကိုယျ နှုတျခမျးသားတှနေဲ့ ကနျြနရောမှနျသမြှကိုလဲ အသုံးပွုနိုငျတယျ။ Fingering the vagina (ဗဂြိုငျးနား) ထဲကို လကျထညျ့တာလဲ လုပျပါတယျ။ • G-Spot ဆိုတာကို ထိမိစရေတယျလို့လဲ ပွောကွတယျ။
(ဗဂြိုငျးနား) ရဲ့ရှေ့(ရှဆေို့တာ ပကျလကျအိပျနရေငျ အပျေါ ကိုပွောတာပါ) ၅ စငျတီမီတာနရောမှာလို့ ဆိုတယျ။ • A-spot က သူ့ထကျ ပိုနကျတဲ့နရောမှာ ရှိတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီနရောတှေ တကယျရှိ-မရှိ ငွငျးနကွေဆဲဖွဈတယျ။ • ကိုယျ့ဖါသာကိုယျလုပျသူတှကေ ဘယျနရောကို ဘယျလို လုပျရငျ ကနြေပျမှုပိုစမေယျဆိုတာကိုယျတိုငျသိပါတယျ။ ဆရာ ဝနျမလိုပါ။
သာယာမှုရရငျ အရညျပိုစိုစှပျလာမှာ အမှနျပါ။ • G-Spot ejaculation ဆိုတာ ကနြေပျမှု ကောငျးလှနျးပွီး အရညျဟာ Urethra ဆီးထှကျလမျးကနေ ထှကျတယျ။ Urine ဆီးတော့ မဟုတျဘူး။ • အမြိုးသမီးတှေ Orgasm ပွီးတဲ့အခါ ထှကျတဲ့အရညျ Female ejaculate ထဲမှာAntibodies (အငျတီဘျောဒီ) တမြိုးပါတယျ။
အဲဒါဟာ ယောကျြားတှေ Prostateဆီးကြိတျကထှကျတာနဲ့ အလားတူတယျ။ အတှငျးကကြအြထိ လကျထညျ့ရမှာမို့ လကျခြောငျးသုံးတာကွောငျ့ A-spot ကိုထိစဘေို့ နညျးတယျ။ Vibrator တုနျခါမှုရှိတဲ့ ကရိယာနညျး • (ဗဈတိုးရီးယား) ခတျေက Female hysteria အမြိုးသမီး (ဟဈတီးရီးယား)ရောဂါကုသနညျး တခုထဲမှာ Masturbation နညျးပါတယျ။ Pelvic massage လို့သာချေါသေးတယျ။ခေတျပျေါ Vibrators နဲ့ Sex toys တှဟော ၁၉၈ဝ နောကျ ကစပွီး ပျေါပွူလာဖွဈလာတယျ။
• ၂ဝဝ၉ လလေ့ာမှုတခုအရ အမရေိကားမှာ ၁၈-၆ဝ နှဈအရှယျရှိယောကျြား ၄၆% နဲ့ မိနျးမ၅၃% ဟာ Vibrator သုံးသတဲ့။ • မိနျးမ ၃ဝ% ကသာ ပုံမှနျ ဖိုမ ဆကျဆံရာကနေ (အျောဂဇငျမျ) ရတယျ။ အဲဒါအတှကျVibrators ကို သုံးဘို့ ဆရာဝနျတှကေ ညှနျတယျ။ Masturbation အတှကျရောIntercourse အတှကျပါ အသုံးခိုငျးတာ ဖွဈပါတယျ။ • Clitoral vibrator ဆိုတာ သပျသပျလာသေးပမေဲ့ အားလုံးဟာ ဒီနရောကိုထိမိစရေတာဖွဈတယျ။
ဒီဇိုငျးကတော့ အမြိုးမြိုးရှိတယျ။ o G-Spot Vibrator ဆိုတာလဲလာသေးတယျ။ ခပျကောကျေ ကာကျပုံရှိတယျ။o Dildo-shaped ဆိုတာ ယောကျြား-အင်ျဂါပုံအ တိုငျး အရှယျတူ လုပျထားတဲ့ကစားစရာမြိုးဖွဈတယျ။ Plastic ( ပလပျစတဈ)၊ Silicone (စီဘီကှနျ)၊ Rubber(ရာဘာ)၊ Vinyl (ဗီနိုငျးလျ) နဲ့ Latex (လေးတကျဈ) ပစ်စညျးတှနေဲ့ လုပျထားတယျ။ o Waterproof လဲရှိတယျ။ ရခြေိုးခနျးမှာ သုံးနိုငျဘို့ ဖွဈတယျ။
o Egg-shaped vibrator နဲ့ Rabbit ဆိုတာတှကေ ဗဂြိုငျးနာရော (ကလိုကျတောရဈ)ကိုပါ ထိမိစဘေို့ လုပျတားတယျ။ • ကနဒေါနိုငျငံက (တိုရှနျတို) လလေ့ာမှုအရ ဖါသာ-အာသောွေ ဖရာမှာ (ဘိုငျဗရတော) ကိုအသုံးမြားရငျ တကယျတနျး ခငျပှနျး- အဖျေါနဲ့ဆကျဆံခြိနျမှာ (အျောဂဇငျမျ) ရတာကိုDesensitize ပွောငျပွနျအကြိုး သကျရောကျစနေိုငျတယျလို့ သတိပေးတယျ။
အဲဒီ ဆရာဝနျကသူ့လူနာတှကေို (အိုကျဈခရငျမျ) ကို နတေို့ငျး မစားခငျြကွသလို နသေငျ့တယျလို့အကွံပေးတယျ။ Autonomic nervous system အလိုအလြှောကျ သကျရောကျတဲ့အာရုံကွော စနဈက အကငျြ့ရသှားစမေယျလို့ ပွောတာ ဖွဈပါတယျ။ • Vibrator သုံးရငျ လိငျအင်ျဂါနရောမှာ နာတာ-ထုံတာ ဖွဈမလား သတိထားသငျ့တယျ။Herbenick’s vibrator survey သုတသေ နအရ ၃ဝ% မှာ အဲလိုဖွဈတယျ။
တခွားနညျးတှေ • တခြို့က Back ofavibrating toothbrush head တုံခါမှု လုပျေ ပးနိုငျတဲ့သှားတိုကျတံခေါငျးရဲ့ နောကျဖကျ၊ • တခြို့က Handle ofahairbrush ခေါငျးဘီး လကျကိုငျရိုး၊ • တခြို့က Water jets in the bathtub ရခြေိုးခနျးက ရပေနျး ထိပျဖြား သုံးကွတယျ။ • တခွားနညျးနာတှလေဲ ရှိမှာပါ။ ရောဂါမဟုတျပါ
• မိနျးကလေးတှလေဲ ယောကျြားလေးတှလေိုဘဲ ဖါသာအာသွာေ ဖဖြောကျတာလုပျမိတာကို Feelguilty အပွဈလုပျသလို ခံစား တတျကွတယျ။ Sex therapists လိငျအထူးကုဆရာဝနျတှကေေ တာ့ အဲလို မထငျမွငျသငျ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ • Mood စိတျမူ၊ Spirits စိတျဓါတျ တကျစမေယျ။ စိတျကနြသေူေ တှကို သကျသာရာ ရစမေယျ။Solo sex တယောကျထဲစခနျး သှားတာမို့ ကိုယျ့အဖျေါ ဘယျလိုနမေလဲ ဆိုတာစိတျကူးထညျ့စရာလဲ မလိုဘူး။
• အဲလိုလုပျတာဟာ ကိုယျ့ ခငျပှနျး-အဖျေါကို မခဈြလို့လဲ မဟုတျဘူး။ ကိုယျ့အတှကျကိုယျလုပျတာသာဖွဈတယျ။ သူနဲ့နတေဲ့အခါမှာလဲ ပိုပွီးသာလှနျကောငျးမှနျစနေိုငျသေးတယျ။ သူ့ကိုကိုယျကနေ ဘယျလိုကဘယျလိုဆိုတာ ဆရာလုပျနိုငျတယျ။ • ယောကျြားနဲ့နလေို့ (အျောဂဇငျမျ) မရတတျသူတှေ ဒီနညျးနဲ့ကူနိုငျ တယျ။
Lubrication စိုစှပျမှု၊ Desire ဆန်ဒဖွဈပျေါမှု၊ Arousal စိတျနိုး ထမှု နဲ့ Orgasm(အျောဂဇငျမျ) တှမြော ပိုကောငျးစတေယျ။ • Pain နာတတျတာလဲ သကျသာစမေယျ။ မနာတတျသူတှလေဲ သုံးကွတာပါဘဲ။ • သိတဲ့အတိုငျး အမြိုးသမီးမြားဟာ စိုးရိမျမှုမြားတတျတယျ၊ ဖိစီးမှုမြားတတျတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ စိတျဖွလြှေော့ပေးဘို ပိုလိုမယျ။
(မာစတာဘေးရှငျး) ကနေ ကူညီနိုငျတယျ။ • Migraine (မိုငျဂရငျး) ခေါငျးမူး-ခေါငျးကိုကျရောဂါ ရှိသူတှကေိုလဲ သကျသာရာ ရစနေိုငျတယျ။ ခပျရှားရှား တခြို့လူနာတှမှော (အျောဂဇငျမျ) ကနေ (မိုငျဂရငျး)ထတတျတယျ။ • Menstrual cramps ရာသီလာရငျနာတာ နဲ့ Premenstrual syndrome (PMS) ရာသီအလာခငျဖွဈခငျြတာတှေ ကိုပါ သကျ သာစမေယျ။ Masturbation (မာစတာဘေးရှငျး) အသကျ ၁၈ နှဈပွညျ့မှ ဖတျပါ (၂၅) ကိုလဲဖတျနိုငျပါတယျ။
အမဲသားရှောင်တာဟာ လောကီအကျုိး ရှိ/မရှိ